July 4, 2021 - Celegroup
July 4, 2021 cele group 0
ခေတ်ကြီးက တိုးတက်တာ မြန်ဆန်နေပါတယ်နော်။ ရှေးခေတ် မိန်းကလေးတွေလို အိမ်မှာပဲ နေလို့ ရတဲ့ ခေတ်လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေလည်း မြင့်တက်လာလျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ ရှေးရိုးစွဲ အမြင်တွေကနေ ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရတုန်းပါ။ “မိန်းကလေးဆိုတာ” ကနေ အစချီပြီး မိန်းကလေးဆိုတာ ဒီလို ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး လူတွေက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ တကယ်က အဲ့ထက်ပိုပြီး အရေးတကြီး သိဖို့ လိုအပ်တာတွေက ၂၁ ရာစုမှာ ရှိလို့ […]
ကောင်းလိုက်တဲ့အမေ့ရဲ့ ဖြတ်ထိုးညာဏ် အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်က ပြန်လာတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြန်ပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ သူမမြန်မာပြည်ကိုပြန်ဖို့ အမေရိကားလေယာဉ်ကွင်းမှာ လေယာဉ်တက်ဖို့အလုပ် သူမသယ်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို တန်ပိုစစ်ပါတော့တယ်။ သူမသယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာ စာအုပ်စာပေကောင်းတွေအများကြီး ဝယ်လာတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည် ဒီလိုနဲ့အမေရိကန်အရာရှိကသူမရဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကတ္တားပေါ်တင်လိုက်တော့အနည်းငယ် တန်ပိုနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သူမပစ္စည်းတွေထဲကမလိုအပ်သော အရာကိုထားခဲ့ဖို့အရာရှိကပြောပါတယ်။ သူမအတွက်ကတော့အရာရာတိုင်းက အရေးကြီးသောပစ္စည်းချည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒီတော့သူမလဲမဆိုင်းမတွဘဲ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးတွေကိုဆွဲခွာပစ်လိုက်ပြီး ကဲအရာရှိမင်းပြန်ချိန်လို့ရပါပြီတဲ့။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးဆိုတာစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ အလေးဆုံးအရာတစ်ခုမဟုတ်လား။ အမေရိကန်အရာရှိလည်းအံ့သြမှင်သက်စွာနဲ့ သူမကိုငေးကြည့်နေတော့တာပေါ့။ ဒါနဲ့တန်ပိုပြန်စစ်လိုက်တယ်။OKသွားတယ်။ သူမလိုချင်တာအားလုံးမြန်မာပြည်ကို သယ်ဆောင်သွားလို့ရသွားပြီလေ။ အမေရိကန်အရာရှိလည်း သူမရဲ့ဥာဏ်ရည်ထက်မြတ်မှုကို မလေးစားဘဲမနေနိုင်တော့ဘဲ WHERE […]
အရှုံးထဲမှ အမြတ်ထုတ်ယူနိုင်မယ့် နည်းလမ်း
အရှုံးထဲမှ အမြတ်ထုတ်ယူနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ရှုံးနိမ့်ခြင်းနဲ့ အခက်အခဲတွေဟာ ဘဝမှာ နေ့စဉ်လိုလို ကြုံနေရမယ့် ပုစ်ဆာတွေပါပဲ။ ရှုံးခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ခြေနင်းတုံးတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ အောင်မြင်ချင်သူတွေဟာ အရှုံးအပေါ် သဘောထားမှန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရှုံးခဲ့တာတွေကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်သွားပြီး ဆက်မကြိုးစားရဲတော့ရင် အရှုံးသမားဘဝမှာ သံသရာလည်နေမှာပါ။ ကမ္ဘာကျော် အောင်မြင်ရေးဆရာကြီးတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ ဂျွန်စီ မက္ကဝဲလ်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်း ရှိပါတယ်။ သာမန်သူလိုကိုယ်လို လူတွေနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအကြား ခြားနားချက်က ရှုံးနိမ့်မှုတွေအပေါ် သူတို့သဘောထားနဲ့ […]
ပါးစပ်ဟပြီး အိပ်တတ်တာကြောင့် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ ညက အိပ်ရေးမဝတာကြောင့် ကားပေါ်မှာ၊ အလုပ်စားပွဲမှာ အိပ်ငိုက်ရင်းက ပါးစပ်ဟပြီး အိပ်ပျော်သွားတာမျိုး ဖြစ်ဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ညဘက်အိပ်တိုင်း မှာ ပါးစပ်ဟပြီး အိပ်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါသလား။ ပါးစပ်ဟပြီး အိပ်တတ် တာကြောင့် သွားနဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို အောက်ပါထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွားကြွေလွှာ ပျက်စီးနိုင်ခြေ များတယ် ဆိုဒါနဲ့ အမြှုပ်ထွက်တဲ့ အချိုရည် တွေက သွားအရောင်ကို စွန်းထင်းစေသ လိုပဲ ပါးစပ်ဟပြီး အိပ်တာကြောင့် […]
သင့်ဘဝကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါ ဘယ်တော့မှ ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမရပ်တည်ပါနဲ့
သင့်ဘဝကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါ ဘယ်တော့မှ ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမရပ်တည်ပါနဲ့ အခြားဒုတိယဝင်ငွေဝင်နိုင်အောင် ရင်းနှီးထားပါ။လူတစ်ယောက်ဟာ ဝင်ငွေတစ်ခုထဲကို ခြေစုံပစ်ရပ်တည်နေရင် အဲ့ဒိဝင်ငွေရပ်တန့်သွားတဲ့နေ့ ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဘဝမှာလည်းအားလုံး ဗြောင်းဆန်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်ဒုတိယဝင်ငွေရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို အမြဲရှာထားပါ။ပိုက်ဆံသုံးရာတွင် သင့်မှာမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပါများရင် သင့်မှာလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေစွန့်လွှတ်ရတတ်တယ်။တစ်ချို့တွေက လူသာမချမ်းသာတာပါ။ ကိုင်တဲ့အသုံးအဆောင်တွေကတော့ အပျံစားတွေပါချည်းပဲ။ရေရှည်ကိုမကြည့်ပဲ ရေ တိုပဲ ကြည့်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေပါ။သူများလုပ်တာ လိုက်လုပ်ချင်တယ်။ဒါပေမယ့် သူ များလို သူမချမ်းသာသေးဘူးဆိုတာကိုမေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်ကမချမ်းသသေးချိန်မှာ ချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့iPhone ပြိုင်ကိုင်တန်း သွားမကစားပါနဲ့။သင်ပဲရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ မလိုတာတွေ ဝယ်နေတဲ့အတွက် လိုတဲ့အခါ သုံးစရာမရှိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပိုက်ဆံစုရာတွင်သုံးပြီးလို့ပိုတာကိုမစုပါနဲ့။စုပြီးလို့ ပိုတာကို သုံးပါ။သုံးပြီးလို့ပိုမှ […]
စီးပွားလာဘ်ပွင့် ငွေဝင်ယတြာ မီးတိုင် မိတ်ဆွေများအတွက် စီးပွားလာဘ်ပွင့် ငွေဝင်မီးတိုင် စီရင်နည်းကို ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်. ကိုယ်တိုင် စီရင်အသုံးပြုတဲ့ နည်းဖြစ်သလို လက်တွေ့စီရင်အောင်မြင်နေကြဖြစ်တာကြောင့် ယုံကြည်စွာ သူံးစွဲနိုင်ပါတယ် စီရင်နည်း အနေနဲ့ကတော့ မိမိ လက်ဝါးအရှည်ထက်မလျော့တဲ့ မိးတိုင်မှာ စီရင်ရမှာပါ . ပုံပါအက္ခရာများ အတိုင်း ရေးသားစီရင်ရပါမယ် အက္ခရာ တလုံးဆွဲတိုင်း ဂုဏ်တော်ကိုးပါး အစအဆုံးရွတ်ဖတ်ရပါမယ် .. အက္ခရာ လေးလုံး ရေးသားပြီးပါက မီးတိူင်ကို . […]
အလုပ်ကြိုးစားပြီး ပိုက်ဆံချွေတာစုဆောင်းပေမယ့် မချမ်းသာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ လူတွေမှာ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်မှု့ ဆိုတာမရှိပါဘူး ။ သူတို့ကိုယ် သူတို့လည်း လူချမ်းသာ လို့ မသတ်မှတ်ကြပါဘူး။ တစ်ချို့သောလူတွေဟာ အလုပ်ကြိုးစားတယ်။ ပိုက်ဆံကြိုးစားရှာတယ်။ ပိုက်ဆံလည်းချွေတာစုဆောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် မချမ်းသာကြဘူး။ ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ မတတ်နိုင်တာကို ဝယ်ဖို့ကြိုးစားတယ် ပစ္စည်းတစ်ခုကို (၂) ကြိမ် တိုင်သည်အထိ မဝယ်နိုင်ရင် ထပ်ဝယ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ၊ မဝယ်တာ အကောင်းဆုံး […]
သင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တိုးပွားအောင် ဒီအချက်တွေ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ
သင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တိုးပွားအောင် ဒီအချက်တွေ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ၊ ငွေကြေးတွေဟာ စနစ်တကျမကိုင်တွယ်တတ်ခဲ့ရင် ရေလိုပဲအပေါက်ရှာပြီး ကိုယ့်ဆီကထွက်ပြေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို မပျောက်ပျက်ရအောင် ရှိရင်းစွဲထက်လည်း ပိုတိုးပွားလာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းစနစ်တွေကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အသုံးခ်ပါ ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ ငွေကြေးဟာ သိမ်းဆည်းထားလို့ မရပါဘူး။ ငွေဆိုတာဟာ တဖြည်းဖြည်း လုံးပါးပါးတတ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချဖို့ကြိုးစားပါ။ […]
ကိုယ့် အပြစ်ကို မြင်တတ်ပါစေ
ကိုယ့် အပြစ်ကို မြင်တတ်ပါစေ လူတစ်ယောက်ကြောင့်ခံစားရပြီး မျက်ရည်ကျတာက မင်းအပြစ်မှမဟုတ်တာ ဒါပေမယ့် ပြန်မကုစားတတ်ရင်တော့မင်းအပြစ်ဖြစ်သွားပြီ။ လူတစ်ယောက်ကြောင့် ဘဝကြီးကအရမ်းခါးသက်တာပဲ လို့တွေးထင်မိတာမင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးချိုမြိန်တဲ့ ကံကြမ္မာတွေကိုပြန်မရှာတတ်ရင်တော့ မင်းအပြစ်။ လူတစ်ယောက်ကြောင့်နာ ကျည်းစိတ်ဝင်တာ မင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးနာ ကျည်းစိတ်ကို အခြေခံပြီးမင်းရဲ့မာနထုတ်မသုံးတတ်ရင်တော့ မင်းအပြစ် ။ လူတစ်ယောက်ကြောင့် သေချင်လောက်အောင် စိတ်ဓာတ်ကျ မိတာမင်းအပြစ်မှ မဟုတ်တာဒါပေမယ့် ကျနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်မကောက်နိုင်ရင် မင်းရဲ့အပြစ် ။ လူတစ်ယောက်ကြောင့်မင်းပြို လဲကျသွားတာမင်းအပြစ်မှ မဟုတ်တာပြန်ထူမတ် ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ မင်းအပြစ် ။ လူတစ်ယောက် […]
ခြေဗလာလက်ဗလာဘဝမှ ကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲခဲ့သူ (၅) ဦး
ခြေဗလာလက်ဗလာဘဝမှ ကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲခဲ့သူ (၅) ဦး အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ အရင်းအနှီးအများကြီး လိုပါတယ်။ တစ်နေရာရာမှာ အောင်မြင်ပေါက်ရောက်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်မှူ ၊ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း ၊ ကံကြမ္မာနဲ့မဆုတ်မနစ်တဲ့ ဇွဲလုံ့လ စတဲ့ များပြားလှတဲ့ စွမ်းရည်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ အခုပြောမှာကတော့ မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ ဘဝအခြေအနေကနေ ကမ္ဘာကြီးကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အထိ စွမ်းနိုင်ခဲ့သူ (၅) ဦး အကြောင်းပါပဲ။ (၁) ဒေါက်တာဆူးဇ် ကလေးစာပေသမိုင်းကို ပြောင်းလဲနိုင်စေသူ ဒေါက်တာဆူးဇ်ရဲ့ ဦးထုပ်ထဲက ကြောင်ကလေး […]
ချစ်စရာကောင်းအောင် စကားပြောနည်း ရုပ်လေးပဲချစ်ဖို့ကောင်းနေလို့မပြီးပါဘူးစကားပြောဆိုရာတွင်လည်း ချစ်စရာကောင်းအောင်ပြောတတ်ရပါတယ်။ယောက်ကျားများအသုံးပြုမည်ဆိုပါက တစ်ချို့နည်းများကိုသာအသုံးချရန် (အကုန်သုံးရင် Gay သွားနိုင်) 1.နော် စကားပြောဆိုရာတွင် နော် ဟုထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းကစကားကိုနူးညံ့သွားစေပါတယ်။ခိုင်းစေသည့်အရာများ/ပူဆာသည့်အရာများတွင် နော်ဟုအသုံးပြုခြင်းကသင့်တော်ပါတယ်။(ကိုကိုနော် / ကလေးကလည်းနော်) ဟုချွဲနိုင် 2.ဗျာ / ရှင်သုံးပါ ကျွန်တော်ချောပါတယ်ဟုပြောမည့်အစား/ ကျွန်တော်ချောပါတယ်ဗျာဟု ပြောခြင်းက ပိုချစ်စရာကောင်းပါသည်။ 3.လေးဟုသုံးပါ.. လူတဈယောကရြဲ့နာမညအြပှညြ့အစုံခေါာမညြ့အစား ကျော်ကြီးလေးဟု ခေါာလိုကခြှငြးက ကြားရသူအဖို့ရင်ခုန်နှုန်းပါမြင့်မားစေပါတယ်။ ရိုင်းစိုင်းစွာဆဲရင်တောင် လေး ဟုထည့်ဆဲခြင်းကချစ်စရာကောင်းစေပါတယ်။ (e.g-နင့်ဂျီးတော်လေး) 4.လက်ကိုင်စကားပြောခြင်း နားထောင်နေသူရဲ့လက်လေးကိုကိုင်ထားပြီးစကားပြောပါ။ဒီနည်းလေးကိုတော့ ကိုယ်ချစ်ရတယ့်သူတွေနဲ့စကားပြောတယ့်အခါမှာသုံးပါ။ […]